QASRIGAASI KUGU FILAN
Tuesday October 09, 2018 - 22:52:41 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Hindisaha dhisitaanka madaxtooyada cusub, halka go'aankeedu ka soo baxayaa waa guriga looga taliyo dalka. Gurigani Wuxu 500 oo tallaabo u jiraa DHAKHTARKA WEYN
Article (Burcoonline) 09.10.2018 Hindisaha dhisitaanka madaxtooyada cusub, halka go’aankeedu ka soo baxayaa waa guriga looga taliyo dalka. Gurigani Wuxu 500 oo tallaabo u jiraa DHAKHTARKA WEYN ee Hargeysa. 1 milyan oo qof oo tahli waayey inay dhakhtar gaar loo leeyahay tagaan ayaa goobtan isku cidhiidhya, si ay adeeg caafimaad uga helaan, kumase filna oo Ninkii galayba ila garay dayaca iyo dakaanka ka muuqda. Waxa sidoo kale dhabarka ka xiga Dugsiga sare ee Faarax Oomaar oo isna ardaydu is dul rasaysan yihiin. Labadaas xarumeed ee adeegga Caafimaad iyo adeegga waxbarasho loogu fidiyo dadweynaha danyarta ahi, waxay tusaale u yihiin sida loogu baahan yahay in la kordhiyo xarumaha la midka ah ee adeegyadan bixiya.